သဒ္ဒာစည်းမျဉ်း (၁၁) ခု - အပိုင်း (၁) - Myanmar Network
သဒ္ဒာစည်းမျဉ်း (၁၁) ခု - အပိုင်း (၁)
Posted by Myanmar Network on July 6, 2012 at 10:54 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၀ါကျတည်ဆောက်ပုံ အရှုပ်အထွေးတွေကို ပိုင်နိုင်ကျွမ်းကျင်ဖို့နဲ့ တိကျမှန်ကန်စွာ ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ဖို့ အကူအညီဖြစ်အောင် သဒ္ဒာစည်းမျဉ်း ၁၁ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သဒ္ဒာစည်းမျဉ်း ၁၁ခုထဲမှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Active Voice
ဘယ်ဘာသာစကားမဆို Active Voice ၀ါကျဆိုရင် ပြုလုပ်သူ ကတ္တား subject နဲ့ စတာဘဲ။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ ကတ္တား subject နောက်က ပြုလုပ်မှုကို ဖော်ပြတဲ့ ကြိယာ verb လိုက်တယ်။ ပြုလုပ်မှုကို ခံယူတဲ့ object ရှိရင် ကြိယာ verb နောက်က လိုက်ရတယ်။ / S+V+O (ကတ္တား+ကြိယာ+ကံ) လို့ ပုံသေနည်းနဲ့ မှတ်ထားနိုင်တယ်။ ဒီစည်းမျဉ်းဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားရဲ့ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တယ်။
Mary walked the dog. မေရီက ခွေးကို လမ်းလျှောက်ခေါ်သွားတယ်။
The dog liked Mary. ခွေးက မေရီကို နှစ်သက်တယ်။
I did not like the dog. ဒို့က ခွေးကို မနှစ်သက်ဘူး။
+V+O ၀ါကျတစ်ခုရဲ့နောက်က coordinating conjunction ချိတ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ ခံပြီး နောက်ှ+ဠ+ဥ ၀ါကျတစ်ခု လိုက်လို့ ရပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ပုံသေနည်းက S+V+O, COORDINATING CONJUNCTION+S+V+O (ကတ္တား+ကြိယာ+ကံ ကော်မာ ချိတ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ + ကတ္တား+ကြိယာ+ကံ) ဖြစ်ပါတယ်။
coordinating conjunction ချိတ်ဆက်သမ္ဗန္ဓတွေကို မမေ့အောင် ရှေ့ဆုံးအက္ခရာတွေကို တွဲပြီး ဒီလိုမှတ်လို့ရတယ်။
* For အကြောင်းကတော့
* And ပြီးတော့
* Nor ပြီးတော့ မ --- ဘူး
* But သို့သော်
* Or အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘူးဆိုရင်
* Yet ဒါပေမယ့်
* So အဲဒီတော့
ပြောစရာ ၂ခုကို ၀ါကျတစ်ခုဖြစ်အောင် ဆက်ပေးချင်ရင် FANBOYS လို့ အတိုကောက် မှတ်ထားတဲ့ ချိတ်ဆက်သမ္ဗန္ဓတွေကို သုံးပါတယ်။ ကော်မာခံပေးဖို့ကို မမေ့ပါနဲ့။
I do not walk Mary's dog, nor do I wash him. မေရီရဲ့ ခွေးကို ဒို့ လမ်းလျှောက်ခေါ်မသွားဘူး၊ ရေလည်း မချိုးပေးဘူး။
Mary fed her dog, and I drank tea. မေရီက သူ့ခွေးကို အစာကျွေးပြီး ဒို့က လက်ဖက်ရည်သောက်တယ်။
Mary feeds and walks her dog every day, but the dog is still hyperactive. မေရီက သူ့ခွေးကို အစာကျွေးပြီး နေ့တိုင်း လမ်းလျှောက်ခေါ်သွား ပေမယ့် ခွေးက အငြိမ်မနေနိုင် ခုန်ပေါက်နေတုံးဘဲ။
တစ်ခုပြီးတစ်ခု တန်းစီတဲ့အခါ နောက်ဆုံးရှေ့မှာ သုံးတဲ့ ကော်မာ
နောက်ဆုံးရှေ့မှာ သုံးတဲ့ကော်မာကို အောက်စဖို့ကော်မာလို့လည်း ခေါ်တယ်။ သဒ္ဒာစည်းမျဉ်း ၁၁ခုထဲမှာ နောက်ဆုံးရှေ့ကော်မာသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းမျဉ်းဟာ အငြင်းပွားမှု အများဆုံး စည်းမျဉ်းဖြစ်တယ်။ အချို့က အဲဒီနေရာမှာ ကော်မာလုံးဝ မသုံးချင်ကြဘူး။ မသုံးတတ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ နောက်ဆုံးရှေ့မှာ သုံးတဲ့ ကော်မာက သာမန်အားဖြင့် "and" ရဲ့ ရှေ့မှာ သုံးတာဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ၀ါကျမှာဆိုရင် "and" ရဲ့ ရှေ့ "dog" ရဲ့ နောက်မှာ သုံးထားတယ်။
Pets R Us has lizards, dogs, and birds. ပက်စ်အာရ်ယူဆိုတဲ့ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေ ရောင်းတဲ့ ဆိုင်မှာ အိမ်မြောင်တွေ၊ ခွေးတွေနဲ့ ငှက်တွေ ရောင်းတယ်။
စာရင်းတစ်ခုလို တန်းစီပြီး ဖော်ပြမယ်ဆိုရင် ကော်မာနဲ့ ခွဲခြားပေးတာဖြစ်တယ်။ ဥပမာ ၀ါကျမှာ စကားလုံး တစ်လုံးစီဘဲ ပါတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ခွဲခြားပေးရတာဖြစ်တယ်။ လွယ်တာပေါ့။ စကားလုံး အများကြီး ပါလာရင် ရှုပ်ထွေးမှု ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် စည်းမျဉ်းကတော့ ဒီအတိုင်းပါဘဲ။
Pets R Us has lizards and frogs, dogs and cats, and parakeets and macaws. ပက်စ်အာရ်ယူ ဆိုင်မှာ အိမ်မြောင်တွေနဲ့ ဖားတွေ၊ ခွေးတွေနဲ့ကြောင်တွေ နဲ့ ကြက်တူရွေးတွေနဲ့ ကြက်တောတွေ ရောင်းတယ်။
ဒီဥပမာဝါကျမှာ နောက်ဆုံးရှေ့ကော်မာက ၀ါကျထဲမှာပါတဲ့ နောက်ဆုံး "and" ရဲ့ ရှေ့မှာ မဟုတ်တာကို သတိပြုပါ။ နောက်ဆုံးရှေ့ကော်မာရဲ့ နောက်မှာ "and" ထည့်ပြောတာကလည်း ဆိုလို့ကောင်းအောင်သာ ဖြစ်တယ်။ သဒ္ဒာနည်းအရတော့ "and" ပါပါ မပါပါ မထူးပါဘူး။ အဓိပ္ပာယ်က ဒီအတိုင်းပါဘဲ။
သဒ္ဒာစည်းမျဉ်းတွေကို ဖော်ပြမယ်ဆိုတော့ ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ရပ်တွေထဲက ဘာကြီးမှန်း မသိဆုံးဖြစ်တဲ့ ဆီမီကိုလံ မပါလို့ ဘယ်ဖြစ်မှာဘဲ။ ဆီမီကိုလံကို ကြောက်ဖို့ မလိုဘူး။ သုံးရတာ အလွယ်ဆုံးဖြစ်တယ်။ စိတ်ကူး နှစ်ခုကို ဆက်စပ်ပေးချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လို ဆက်စပ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုရင်၊ ဒါမှမဟုတ် အပင်ပန်းခံပြီး ဆက်စပ်သမ္ဗန္ဓ coordinating conjunction မရွေးချင်ဘူးဆိုရင် ဆီမီကိုလံကို သုံးလိုက်နိုင်တယ်။ စိတ်ကူး ၂ခု ကွဲပြားနေပြီး သီးခြား ၀ါကျ ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် နီးကပ်စွာ ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ထင်မြင်ကြောင်း၊ ၀ါကျ တစ်ကြောင်းတည်း ဖြစ်သင့်ကြောင်း ဆီမီကိုလံနဲ့ ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။
Mary's dog is hyperactive; it won't stop barking or sit still. မေရီရဲ့ခွေးက အငြိမ်မနေနိုင်ဘူး၊ ဟောင်ချည်းနေတယ်၊ ငြိမ်ငြိမ် မထိုင်နေနိုင်ဘူး။
My heart is likeacup of Lapsang Souchong tea; it's bitter and smoky ဒို့ရဲ့ နှလုံးသားက လက်ဆန်ဆူချောင် လက်ဖက်ရည်လိုဖြစ်နေတယ်၊ ခါးလည်းခါး၊ တရှူးရှူး တရှဲရှဲနဲ့။
Mary has to walk her dog every day; it is the most hyperactive dog anyone has ever seen. မေရီကသူ့ရဲ့ခွေးကို နေ့တိုင်း လမ်းလျှောက်ခေါ်တယ်၊ ဘယ်သူမဆို ဒီထက် အငြိမ်မနေနိုင်တဲ့ခွေး တွေ့ဖူးမှာ မဟုတ်ဘူး။
Permalink Reply by Kyaw Soe on July 18, 2012 at 7:26
Good for me .Thanks.
Permalink Reply by Me Me Kyaw on July 18, 2012 at 9:25
Permalink Reply by nan newe on July 18, 2012 at 9:38
Permalink Reply by may ye zaw on July 18, 2012 at 9:50
Permalink Reply by thae thae htwe on July 18, 2012 at 9:51
i have known semicolon from this
တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက် အပိုင်းတွေကိုလည်း စောင့်ဖတ်ပါ့မယ်။
Permalink Reply by shwe zin on July 18, 2012 at 10:10
Permalink Reply by su sandy on July 18, 2012 at 10:11
thanks.....waiting for new posts if possible :)
Permalink Reply by 0ybdlf3hmqmoj on July 18, 2012 at 10:19
အသံထွက်အခွေကိုလည်း ဒေါင်းလော့ဒ် လုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်နော်
Permalink Reply by Thant Zin Oo on July 18, 2012 at 10:45
Permalink Reply by Naywin on July 18, 2012 at 12:15
I want to know the last sentence " it is the most hyperactive dog anyone has ever (or) never seen.
Permalink Reply by Min Khant Zaw on July 18, 2012 at 23:30
Permalink Reply by Ratan Biswas on July 19, 2012 at 18:40